Avicii သေခြင်းတရား - သူတို့ကအောင်မြင်မှု၏တိုတ | Apg29
563 online! | Sidvisningar idag:6660 | Igår: 149 115 |
Avicii သေခြင်းတရား - သူတို့ကအောင်မြင်မှု၏တိုတ
"။ သူတို့ကအောင်မြင်မှု၏တိုတောင်းတဲ့ကာလအဘို့အမြင့်မားသောစျေးနှုန်းပေးဆောင်": တစ်ဦးကဆွေမျိုးဆှီဒငျစူပါစတား Avicii (တိ Bergling) ကျွန်မပြန်ဖြေထားတဲ့အသေခံသည်ငါ့အယနေ့ညပြောသည် သူက 28 နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုမွကွေီးပျေါမှာကိုဒီမှာရေတို, ဒါပေမဲ့ထာဝရရှည်လျားသည်။ ထိုအခါကကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုနှင့်အတူထာဖြုန်းနိုင်အောင်ကိုယျ့ကိုယျကိုမွကွေီးပျေါမှာကိုဤနေရာတွင်ယရှေုကိုကယ်တင်ပါစေအရေးကြီးပါသည်။
ဘယ်လိုငါမှနျးပေမယ်သင်သည်အဘယ်သို့အကြောင်းကိုမည်မဟုတ် Avicci နှင့်အတူခဲ့သလဲ သင်ကိုယ်တိုင်သညျယရှေုအားဖြင့်ကယ်ဆယ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ဖူး, သင်ထာအတွက်ညာဘက်အရပ်မှငှါလာသလော ယေရှုရှိရာအရပ်။
at ဝီကီပီးဒီးယား ကျနော်တို့ Avicii ရှိနသောသူတွေအကြောင်းဖတ်ပါ:
တိ Berg ကလိန်း, မူလကLidén, ပိုကောင်းအော်စကာဆုအတွက်စီရင်စုနယ်များတွင်စက်တင်ဘာလ 8, 1989 ဖွားမြင်, Avicii အဖြစ်လူသိများ, စတော့ဟုမ်း, မပ်စ်ကတ်, အိုမန်အတွက်ဧပြီလ 2018 20 သေဆုံးတဲ့ဆွီဒင် DJ သမား, remix နှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ 2014 မှအဆိုပါနှစ်က 2011 ခုနှစ်သူ 100 အကောင်းဆုံး DJs ၏ DJ သမား Mag ရဲ့စာရင်းထဲမှာအနေအထား 3-6 အတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
မီဒီယာမှာ, Avicii အများပြည်သူမြင်ကွင်းကနေနောက်ဆုံးသောကာလဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းနှင့်သူကောင်းစွာခံစားမခံခဲ့ရကြောင်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းစာ Expressen ရေးသားခဲ့သည်:
မိမိအကြီးမြတ်အောင်မြင်မှုနေသော်လည်း၎င်းတို့၏ backsides ၏အလုပ်အကိုင်များခဲ့ရပြီးတိ Berg ကလိန်းကသူ၏ကျန်းမာရေးနှင့်အတူရုန်းကန်။ 2016 ၏နွေဦး၌သူ Tour ရပ်တန့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
"ကျနော့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အကျေးဇူးတင်တယ်ပေမယ့်, ပစ္စည်းဥစ္စာများကမောင်းထုတ်နှင့်ငါ့အောင်မြင်မှုငါ့အားပေးသနားတော်မူပြီနှစျသိမျ့စဖူး။ ငါကမ္ဘာကြီးကိုခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့မင်္ဂလာရယ်ကိုသိပေမယ့်ငါအနုပညာရှင် "နောက်ကွယ်တွင်သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အသက်အဘို့လည်းနည်းနည်းအချိန်ရှိသည် သူတစ်ဦးမှတ်ချက်အဖြစ်ရေးသားခဲ့သည်။
အခုအချိန်မှာ: အဆိုပါဆွီဒင်စူပါစတား Avicii ရဲ့သေခြင်း - 28 နှစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်
Vecka 04, onsdag 23 januari 2019 kl. 00:42
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 927 102 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 131 bloggartiklar, 93 342 kommentarer och 61 360 bönämnen.